M’ani Nnye Sukuu Ho | Mmabun
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mexican Sign Language Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Na Sɛ Minhu Sukuu So Mfaso Ɛ?
Nea ɛbɛboa wo ni
Nya adesua ho adwempa. Bɔ mmɔden hu sɛnea ɛbɛboa wo daakye. Nea wusua wɔ sukuu no, seesei de, ebia ɛnyɛ ne nyinaa na wubehu mfaso a ɛwɔ so. Nanso nneɛma ahorow ahorow a wusua wɔ sukuu no betumi abue w’adwenem na woate nneɛma a atwa wo ho ahyia no ase yiye. Ɛbɛboa wo ama ‘woayɛ biribiara ama nnipa ahorow nyinaa,’ na ama woatumi ne nnipa a wofi mmeaemmeae akasa. (1 Korintofo 9:22) Sukuu ammoa wo koraa no, ɛbɛma woatumi asusuw nsɛm ho yiye. Wei yɛ biribi a ɛbɛboa wo daakye.
Worekɔ sukuu a, ɛte sɛ nea woreyi kwan ato kwae bi mu​—ɔkwan na woreyi ato kwae mu oo, worekɔ sukuu oo, emu biara no, gye sɛ wowɔ nnwinnade a ɛfata
Nya wo kyerɛkyerɛni ho adwempa. Sɛ wote nka sɛ wo kyerɛkyerɛni ho nyɛ anika a, mfa w’adwene nsi ne so, mmom fa w’adwene si nea ɔrekyerɛ no so. Kae sɛ, nea wo kyerɛkyerɛni no rekyerɛ wo no, ebia wakyerɛ sukuufo foforo saa ade no ara mpɛn pii anaa mpɛn ɔhaha pii mpo. Enti ebetumi aba sɛ ahokeka a odii kan de kyerɛɛ ade a woresua seesei no, ɛnyɛ mmerɛw mma no sɛ ɔbɛkɔ de saa ahokeka koro no ara akyerɛ ade.
Nyansahyɛ bi ni: Nea ɔrekyerɛ no, yɛ ho kyerɛwtohɔ. Sɛ wonte biribi ase a, fa obu bisa no ma ɔnkyerɛkyerɛ wo mu. Afei ma w’ani nnye nea ɔrekyerɛ no ho.
Nya nea wutumi yɛ ho adwempa. Sɛ wowɔ ɔdom akyɛde bi a wunnya nhui a, sukuu betumi ama woahu. Paul kyerɛw kɔmaa Timoteo sɛ: ‘Onyankopɔn akyɛde a wunyae no, hyɛ mu gya.’ (2 Timoteo 1:6) Nea ɛwom ne sɛ, na Timoteo anya honhom kronkron akyɛde bi. Nanso na ehia sɛ ɔyɛ saa “akyɛde” no ho adwuma na anna hɔ ansɛe kwa. Nokwasɛm ne sɛ, Onyankopɔn amfa nhomanim ammɔ yɛn tẽẽ. Nanso obiara wɔ ne dom akyɛde; wo nso wo de yɛ soronko. Ebia na wobɔ mmɔden wɔ biribi mu a wunnim. Sukuu betumi aboa wo ama woahu na woayere wo ho ayɛ no yiye.
Share Share Na Sɛ Minhu Sukuu So Mfaso Ɛ?